Kubadda Dahabka: Mareykanka ayaa ku soo laaban doona Trinidad iyo Tobago - TELES RELAY
ACCUEIL » SPORTS »Kubadda Dahabka: Mareykanka waxay ku guuleysteen lugta labaad ee Trinidad iyo Tobago
Kubadda Dahabka: USA waxay heli doontaa kulanka soo noqoshada ee ka dhacaya Trinidad iyo Tobago
Mareykanka ayaa ka aargoosan doona Trinidad & Tobago inta lagu jiro wareega group-ka ee 2019 Gold Cup.
Isku aadka tartanka, oo isu keenaya kooxaha 16 markii ugu horeysay taariikhdooda, ayaa Arbacadii lagu dhawaaqay. .
Maraykanku wuxuu horay u ogaa in lagu magacaabi doono koox koox D. Kooxdani waxay ka kooban tahay cadow loo yaqaan Panama, Trinidad iyo Tobago iyo Guyana.
Maraykanka ayaa wajihi doona Guiana ah markii ugu horeysay ee St. Paul, Minnesota, Allianz Field dhawaan la dhisay. Qabanqaabiyeyaasha tartanka ka dibna la tartami T & T ee Cleveland afar maalmood ka dib kulan in calaamadee doonaa markii ugu horeysay caawa labada kooxood tan iyo markii guul 2-1 Soca Warriors ee isreebreebka soo baxaayo koobka aduunka Maraykanka MAREYKANKA. June 26 ee Kansas City, Panama jeeda - kooxda baxday Russia 2018 kharashka Maraykanka -
Isla mar ahaantaana, Mexico waxay ku jirtaa kaalinta ugu sareysa Group A, taasoo Canada, Cuba iyo Martinique ay ku biiri doonaan. . Kulamada kooxdu waxaa lagu qaban doonaa Pasadena California bisha June ee 15, Denver bisha June 19 iyo Charlotte afar maalmood ka dib.
Group B, Costa Rica ayaa martigelin doonta kubada dahabka markii ugu horeysay taariikhda June. 16, ciyaaraha soo socda ee kooxdu waxay ka dhici doontaa Frisco (Texas) 20 June iyo Harrison (New Jersey) 25 June. ah Ticos waxaa ku biiray kuwii bilowga ah ee Haiti, Nicaragua iyo Bermuda Gold Cup.
Group C, Jamaica waa wadan kale oo marti gelin doona kulamada markii ugu horeysay June 17. Houston ayaa martigelin doonta labada tababare ee June 21, finalka kooxdiisu afar maalmood ka dib ayaa Los Angeles ku qaban doonta. Honduras, El Salvador iyo Curacao ayaa ku biiray Reggae Boyz.
Gregg Berhalter (USA) ayaa ku biiray Heineken ESPN FC 'Boot Room' si uu u sharaxo sida qaabkiisa uu uqalmayo CONCACAF iyo faallo ka bixiso League of Nations.
Mareykanka ayaa u muuqda midka ugu fudud ee finalka, iyadoo Mexico iyo Costa Rica ay ku jiraan qeybta kale ee kala duwan. Taas ayaa sheegtay, iyada oo aan loo ogolaan karin inuu u qalmo 2018 Koobka Adduunka iyo dhibka u dhaxeeya kooxdiisa, martigaliyeyaashu waxba kama qaban doonaan.
Lix kooxood ayaa u soo baxday Koobka Gold iyagoo ku saleysan inay ka qaybgalaan finalka. u qalmida Koobka Adduunka ee 2018. Kooxaha 10 ee soo haray waxay uqalmeen inay saldhig u noqdaan gelitaanka CONCACAF League of Nations qualifying phase.
Finalka waxaa lagu qaban doonaa Chicago Champion Field ee July 7.
Maqaalkani wuxuu horey u soo galay (Ingiriisi) http://espn.com/soccer/concacaf-gold-cup/story/3822859/gold-cup-us-draw-trinidad-and-tobago-mexico-canada-in-group-a
Europa League - EL: Barnaamijka iyo natiijooyinka quarterfinals go - FOOT 01
Barcelona oo Man United ku garaacday booskeeda